State Counsellor and Union Minister for Foreign Affairs of the Republic of the Union of Myanmar received His Excellency Mr. Yoo Jae-Kyung, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Korea – Ministry of Foreign Affairs
State Counsellor and Union Minister for Foreign Affairs of the Republic of the Union of Myanmar received His Excellency Mr. Yoo Jae-Kyung, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Korea
Daw Aung San Suu Kyi, State Counsellor and Union Minister for Foreign Affairs of the Republic of the Union of Myanmar received His Excellency Mr. Yoo Jae-Kyung, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Korea to Myanmar on 5th January 2017 at Ministry of Foreign Affairs, Nay Pyi Taw.
Dated. 5th January 2017
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ သံအမတ်ကြီး မစ္စတာယူဂျယ်ကျောင်းအား နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ ၅-၁-၂၀၁၇ရက်နေ့တွင် လက်ခံ တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်